၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« A lesson in real harmony by Datin Marina Tun Dr. Mahathir
လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု မှတ်တမ်းတွေ ပြသတဲ့ ပြတိုက်တွင် ရိုဟင်ဂျာရုပ်ပုံများ ခင်းကျင်းပြသ »
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ
နိုဝင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၃ M-Media ရေးသားသူ – သီတာလတ်
* သန်းခေါင်စာရင်းအကြောင်းသိကောင်းစရာခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဦးဝင်းမြင့် (UNFPA) MMSY တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည် မျှဝေရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆရာဦးဝင်းမြင့် အား ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး M.E (Com) Statistics နှင့် ဘွဲ့ရရှိကာ M.Dev (Master of Development Studies) ဘွဲ့ကိုပါ ထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ Nation Planning and Economics Developemnt (အမျိုသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု) ၀န်ကြီး ဌာနတွင် ၁၉ နှစ်ဝန်းကျင်ခန့်၊ IOM (International Organizational Migration ) အဖွဲ့အစည်းတွင် တစ်နှစ်ဝန်းကျင်ခန့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး United Nations Food Programme Association ၏ National Program တွင် Monitoring and Evaluation Officer အဖြစ် လက်ရှိတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါသည်။လက်ရှိတွင် နိုင်ငံသားတိုင်း သိထားသင့်သည့် ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းတွင် မည်သို့မည်ပုံကောက်ယူမည်၊ နိုင်ငံတော်အနေနှင့် မည်သည့်အစီအစဉ်များထားရှိသည်တို့ကို ဆရာဦးဝင်းမြင့်မှ “၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်း အကြောင်းသိကောင်းစရာ”ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဟောပြောခဲ့ပါသည်။
အစိုးရနှင့် UNFPA တို့ ပူးပေါင်း၍ ၄-နှစ်ကျော်ကျော် စီမံကိန်းတစ်ခုဟာ “Population & Housing Census Myanmar 2014’’ လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်း ဆိုတဲ့စီမံကိန်းပါ။ သန်းခေါင်စာရင်းကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ် ကောက်ခံထားဖူးပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကို ရပ်ကွက်အခေါ်က အိမ်ထောင်စုစာရင်းနဲ့ မှားတတ်ကြတယ်။ လူဦးရေနှင့်သန်းခေါင်စာရင်း Logo လေးကလည်း အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ ကော်မတီဖွဲ့ပြီး သေချာရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်။ “ပြည်သူအားလုံး ပါဝင်ဖို့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြစို့” အားလုံးပါဝင်နိုင်စေဖို့ ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။
(၁) သန်းခေါင်စာရင်း နောက်ခံသမိုင်း
(၂) သန်းခေါင်စာရင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(၃) သန်းခေါင်စာရင်း နည်းပညာ
(၆) သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခြင်းမှ ရရှိမည့် ရလဒ်များ
(၇) ပြည်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ ဆိုပြီး အပိုင်းလိုက်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သန်းခေါင်စာရင်းကို ဗြိတိသျှလက်အောက်ကျရောက်ခဲ့သော (၁၈၇၂ မှ ၁၉၄၁)ခုနှစ်ထိ ၁၀နှစ်တစ်ကြိမ် ကောက်ယူခဲ့တယ်။ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်ယူဖြစ်တော့ဘဲ ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ် ကောက်ခံထားဖူးပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှ နိုင်ငံတိုင်းတွင် သန်းခေါင်စာရင်းကို ၁၀ နှစ်တစ်ကြိမ်ကောက်ခံရမည် ဟု သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းတစ်ကြိမ်ကောက်ယူရန် အနည်းဆုံးအချိန် (၄) နှစ်ယူရတယ်။ ငွေကြေးကုန်ကျမှုအလွန်များတယ်။ လူဦးရေပညာအရ (၁၀)နှစ်ကိုတစ်ကြိမ် လူဦးရေးစာရင်းကောက်ထားလျှင် အဲဒီစာရင်းသည် နောင် (၁၀)နှစ်အတွက် စီမံကိန်းများရေးဆွဲရန် ခိုင်မာသော သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ ၁၉၈၃ နောက်ပိုင်းမှာ သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်နိုင်တော့ဘူး။ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အစိုးရမှ သန်းခေါင်စာရင်း မကောက်တော့ဘဲ နမူနာစစ်တမ်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာရုံးများမှ မှတ်တမ်း၊ မှတ်ရာများ အချက်အလက်များကို ယူပါတယ်။ ပြီးတော့လူဦးရေကိုခန့်မှန်းတယ် ၁၉၈၃ကစပြီး မြန်မာနိုင်ငံဟာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတွေ နောက် suryey လို့ခေါ်တဲ့စစ်တမ်းတွေ administrative record တွေကပဲလူဦးရေကိုခန့်မှန်းခဲ့ရတယ် တွက်ချက်ခဲ့ရတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၂၀၁၄ကျရင် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ကြမယ်ဆိုပြီး လက်ရှိအစိုးရဦးသိန်းစိန်က ရည်ရွယ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဖွံ့ဖြိုးဖို့ကူညီပေးတဲ့အခါတော့ လူပေါ်မူတည်ပြီးအထောက်အပံ့ပေးရတယ်။ ဆိုလိုတာက လူဦးရေတိတိကျကျ မသိဘူးဆိုရင် ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ အရမ်းခက်ခဲတယ်။ ဆိုလိုတာက လူ၁၀၀၀အတွက်ပေးရမယ့်ဟာကို လူ၅၀၀၀အတွက်တွက်တယ။် လူ၅၀၀၀အတွက် ပေးရမယ့်ဟာကို လူ၁၀၀၀အတွက်တွက်တယ်။ ပိုတာလိုတာတွေ အများကြီးရှိတဲ့အတွက် လူဦးရေတိကျဖို့လိုတယ် ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုး၇ှိတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်နေလည်းဆိုတော့ လ.ဝ.ကဦးစီးဌာနက ၂၀၁၂မှာလူဦးရေသန်း၆၀ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းတယ်။ ဒါအစိုးရခန့်မှန်းတာ အဲဒါကိုအစိုးရကပဲ လ၀က၀န်ကြီးဋ္ဌာနက ခန့်မှန်းတဲ့သန်း၆၀ဆိုတဲ့ဟာကို UNက သန်း၅၆သန်းပဲ ခန့်မှန်းတယ်။ အဲ့တော့လေးသန်းလောက်ကွာတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ဖို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်လိုက်တော့ US$ 58.5 သန်းခန့် ကုန်ကျမယ်။ အဲဒီစရိတ်စကတွေကို အစိုးရတစ်ဦးတည်းလည်း ကုန်ကျမခံနိုင်ဘူး။ UN တစ်ခုတည်းကလည်း ကုန်ကျမခံနိုင်ဘူး။ အဲအတွက် ရန်ပုံငွေရှာရတယ်။ အစိုးရက US$ 15 သန်းထည့်ဝင်ပြီး UNကတော့ US$5သန်းထည့်ဝင်တယ်။ အခြားနိုင်ငံက ဖံွံ့ဖြိုးမှုကို ကူညီပေးနေတဲ့ အလှူရှင်တွေက ကျန်တာ ထည့်ဝင်ကြတယ်။ အားလုံး US$ 62 သန်းခန့် ရရှိထားပြီ။
တကမ္ဘာလုံးမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တဲ့အခါ နည်းလမ်း ၂ မျိုးနဲ့ကောက်တယ်။ နေမြဲလူဦးရေကို ကောက်ခြင်းနှင့် တွေ့ရှိတဲ့နေရာမှာ တွေ့ရှိတဲ့လူတွေကို ကောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တဲ့အခါ တွေ့ရှိတဲ့နေရာမှာ တွေ့ရှိတဲ့လူတွေကို ကောက်ခြင်း(de-fato)ဖြစ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်အတွင်းတွင်ရှိနေသော နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံခြားသားအပါအဝင် အားလုံးသော လူတိုင်းကို ကောက်ယူမယ်။ Census Night ကို ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ရက် စနေနေ့ည ၁၂း၀၀ နာရီဟုသတ်မှတ်ထားတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်ကောက်ယူမည့် ကြာချိန်ကတော့ တနိုင်ငံလုံးကို မတ်လ ၃၀ရက် ၀၀း၀၀နာရီကစပြီး ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ (၁၂) ရက်တိုင်တိုင် ကောက်ယူမယ်။ အဲဒီအချိန် မိမိအိမ်တွင်ရှိနေသော လူအားလုံးကို ရည်ညွန်းပြီး ကောက်ယူမယ်။ ကိုယ့်အိမ်မှာ ဘယ်သူရှိနေနေ အဲဒီအိမ်ရဲ့စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်မယ်။ တွေ့ရှိသမျှ လူတိုင်းကို သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူသောနည်းလမ်းပုံစံကို အသုံးပြုပြီးတွက်ချက်မယ်။ အကယ်၍များ အပြင်မှာ တွေ့ရှိပြီး စာရင်းကောက်ယူပြီးဖြစ်နေရင် ကိုယ်တိုင်က ဘယ်နေရာမှာတော့ ကောက်ယူပြီးပါပြီဆိုတာကို မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောပြဖို့လိုတယ်။ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ မပါဝင်ပါ။ နိုင်ငံခြားသံရုံးကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကသာ ပိုင်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူပြီးမှ သေဆုံးသွားလျှင် သန်းခေါင်စာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး ကျော်လွန်ပြီးမှ မွေးဖွားလာကြသူများ မပါဝင်ပါ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့ သတင်းစာမှာ သန်းခေါင်စာရင်း ဥပဒေ ပြဌာန်းခြင်းကို ဖော်ပြထားတယ်။ လေ့လာကြည့်ပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွန်းအရဆိုရင် နိုင်ငံတိုင်းမှာ သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေဆိုတာ ပြဌာန်းရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၇၃ ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တုန်းက ၁၉၇၂ သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေကို အသုံးပြုတယ်။ ၁၉၈၃ခုနှစ်မှာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တော့လည်း ၁၉၇၂ သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေကို သုံးခဲ့တယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူတဲ့အခါ ခောတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေသော သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေကို ပြုပြင်ပြဌာန်းလိုက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သန်းခေါင်စာရင်းရုံးက နေပြည်တော် ပြည်သူအင်အားဦးစီးဌာနတွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ဥပဒေအရ သန်းခေါင်စာရင်း ကော်မရှင်မှာ ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးခင်ရီ (လ.ဝ.က ဝန်ကြီး)၊ နာယကအဖြစ် ဒု-သမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်းတို့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းသည်။ ကော်မရှင်လက်အောက်တွင် လိုအပ်သောကော်မတီငယ်များ ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းတယ်။ ထိုအထဲမှာ ၁၂နိုင်ငံမှ သန်းခေါင်စာရင်း ပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်(၁၄)ဦး ပါဝင်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့လည်းပါဝင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ် ၃၀ ကျော် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ကို တိကျစွာခန့်မှန်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူတဲ့အခါ ပထမဆုံး မြေပုံဆွဲဖို့ မြန်မာ့မြေအနေအထားကို လိုက်ပြီး အပိုင်းငယ်ပေါင်း( )ပိုင်းခြားရတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းအကြောင်း၊ ဘာကြောင့် ကောက်ယူရသလဲဆိုတာကို အများပြည်သူကို အသိပညာပေးရမယ်။ တွက်ချက်နည်းတွေကိုလည်း ဆန်းစစ်ရမယ်။ ဖြည့်စွပ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေအပေါ်မှာ နည်းပညာများနှင့် ပေါင်းစပ်အဖြေရှာမယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူခြင်းကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ နည်းပညာအရ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲ ဆိုတာကိုပါ ဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်ပညာတွေ ခေါ်ယူရခြင်းဖြစ်တယ်။ သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနလည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီ။ ရှေ့ပြေးသန်းခေါင်စာရင်းကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံမှ မြို့နယ်ပေါင်း ၂၀ ကို စမ်းသပ်ကောက်ယူခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ပညာရှင်များကို အစိုးရမှ ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်။ ဒေသဆိုင်ရာဘာသာစကားအလိုက် သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနများကို နေရာအနှံမှာ ဖွင့်လှစ်ပေးမည်။ နောင်တစ်ချိန် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူချိန်ထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ဖို့အတွက် အချက်အလက်များ အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားမယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူချိန်မှာ မေးမယ့်မေးခွန်းက အခရာပဲ။ အဲဒီမေးခွန်းလွှာပြုလုပ်ဖို့အတွက် နေပြည်တော်မှာ အစိုးရဌာနများ၊ လူဦးရေနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကို အစည်းအဝေးခေါ်ယူတိုင်ပင်ခဲ့တယ်။ ဌာနဆိုင်ရာ လိုအပ်သော အခြေခံအချက်အလက်များကို တောင်းခံပြီး နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုအချက်အလက်တွေ ယူမလဲဆိုတဲ့ ပညာရှင်များထံမှ အကြံဉာဏ် တောင်းခံတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှ ပြုစုထားသော စံမေးခွန်းလွှာကို လေ့လာတယ်။ ယခင်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တုန်းက မေးခဲ့ဖူးတဲ့ မေးခွန်းလွှာကို ပြန်ကြည့်တယ်။ အိမ်နီးချင်နိုင်ငံတွေက သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်းပုံစံတွေကို ပြန်ကြည့်တယ်။ အဲဒါအချက်တွေကို အခြေခံပြီး ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းမေးခွန်းလွှာကို ပြုစုရေးဆွဲတယ်။ အကုန်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါ အဲဒီမေးခွန်းလွှာကို အင်္ဂလန်မှာ အရွက်ရေ (၁၆)သန်း ရိုက်နှိပ်ထားတယ်။ နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို ရောက်မယ်။
၂၀၁၄သန်းခေါင်စာရင်း မေးခွန်းလွှာမှာ မေးခွန်းပေါင်း (၄၁) ချက်ပါဝင်တယ်။ အိမ်တစ်အိမ်ကို မေးခွန်း ၄၁ချက်ကို ဖြေဆိုဖို့ ပျမ်းမျှအချိန် မိနစ် ၂၀ ကနေ မိနစ် ၃၀ ထိကြာနိုင်တယ်။ မေးခွန်းတွေကို ဖြေတဲ့အခါ ၁ ၂ ၃ ၄ ဆိုပြီး ရေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ခဲတံနဲ့ ခြယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ အဲလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရမည့်သူတွေကို သင်တန်းပေးထားပြီးသားပဲ။ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအရ တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးရှိတယ်လို့ ပြဌာန်းထားတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နယ်နိမိတ်တွေမှာ အချို့လူမျိုးစုတွေရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်ဘက်( ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်)၊ နာဂဘက်မှာ၊ ပြည်တွင်းမှာလည်းရှိတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဆိုရင် လူမျိုးစုတစ်စုသည် စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 0.001 % အရေအတွက်ရှိမယ်ဆိုရင် လွှတ်တော်မှာ နေရာတစ်နေရာရမယ်။ တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီးတစ်နေရာရမယ်။ အဲဒါကြောင့် ရှမ်း၊ မွန်၊ ချင်းတွေက ရန်ကုန်မှာ သူတို့လူမျိုးစု ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ စစ်တမ်းကောက်တယ်။ အမှန်တော့ အဲဒါတွေက သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ အချို့လူမျိုးစုတွေကလည်း သူတို့လူမျိုးစုကို အသိအမှတ်ပြုရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ လူမျိုးစုတွေကို ထည့်သွင်းရေး၊ မထည့်သွင်းရေးဆိုတာ သန်းခေါင်စာရင်းကိစ္စမဟုတ်ပါ။ အဲဒါက နိုင်ငံရေးရာကိစ္စ ဖြစ်တယ်။ မည်သည့်တိုင်းရင်းသားဖြစ်နေပါစေ၊ မျိုးနွယ်စုကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ သေးသေးဖြစ်ဖြစ် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူတဲ့အခါမှာ ပါကိုပါရမယ်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မတိုင်မီက လူမျိုးစု (၁၄၄)မျိုးရှိရာမှ ၁၉၈၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ လူမျိုးစု(၁၃၅)မျိုးသာ ပါဝင်ပြဌာန်း ခဲ့တယ်။ ပျောက်သွားတဲ့ လူမျိုးစု (၈) မျိုးက သူတို့ရဲ့လူမျိုးစုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ကြတယ်။ ဒါက နိုင်ငံရေးအပိုင်းပါ။ (၁၃၅)မျိုးမှာ ပါဝင်တဲ့မျိုးနွယ်တွေအတွက် code no. တွေပါရှိပြီးသား။ အဲထဲမှာ မပါဝင်တဲ့မျိုးနွယ်စုတွေကိုတော့ Other ဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာ ထည့်မယ်။ ကိုယ့်မျိုးနွယ်စု မပါဝင်သူတွေဟာ Other ဆိုတဲ့ code no. က914။ အဲဒီဘေးက ကွက်လပ်ကလေးမှာ ကိုယ့်ရဲ့မျိုးနွယ်စုကို ဖွင့်ဟပြောပါ။ စာရင်းကောက်သူက ကာယကံရှင်ပြောတဲ့တိုင်း914ရဲ့ဘေးက ……………ကွက်လပ်မှာ ကိုယ်ပြောတဲ့မျိုးနွယ်စုကို ရေးပေးလိမ့်မယ်။ အချို့မှတ်ပုံတင်ကဒ်တွေမှာ ကိုယ့်လူမျိုးအမည်အမှန်ကို မရေးထားခဲ့လျှင်လည်း သန်းခေါင်စာရင်းကောက်သူအား ကိုယ့်မျိုးနွယ်စုကို မှန်ကန်တိကျစွာပြောပါ။ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားကို ထုတ်ပြစရာမလိုဘူး။ ကိုယ်ရထားတဲ့ကတ်ရဲ့အရောင် ပန်းရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အဖြူရောင် စသဖြင့် အရောင်ကိုသာ ပြောပြရမှာပါ။ ဘာကတ်မှ မရှိရင်လည်း မရှိဘူးလို့ ပြောလိုက်ရုံပဲ။ ကိုယ့်မိဘရဲ့လူမျိုးက ဘာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့လူမျိုးကို ထည့်ခွင့်ရှိတယ်။ ကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့လူမျိုးကိုသာ ထည့်တာကို သန်းခေါင်စာရင်းကောက်သူက ရေး၊ မရေး သေချာကြည့်ပါ။ သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ဖြည့်စွက်ထားသည့် လူအမည်ကို မကြည့်ပါ။ အဓိက ဘာသာ၊ လူမျိုးစု ကိုသာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ပြီးနောက် ပထမဆုံးထုတ်ပြန်ချိန်မှာ Other လို့ပဲ ထုတ်ပြန်မယ်ပြီး မျိုးနွယ်စုအမည်တွေ မပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်တဲ့အခါ တစ်မျိုးချင်းစီ ထုတ်ပြန်ပေးမယ်။ သေချာသုံးသပ်စီစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ နောက်တစ်ချိန်ရေးဆွဲမယ့် နိုင်ငံသားဥပဒေအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာမယ်။ ဒါကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်းမှ ရသော အချက်အလက်သည် ဥပဒေပြုရာတွင်လည်း အသုံးဝင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ဖြေဆိုသူသည် မိမိဆန္ဒရှိသော မျိုးနွယ်စုကိုသာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောဆိုပါ။ ကိုယ့်က သေချာပြောရဲ့သားနဲ့ မရေးဘူးဆိုရင် ကြီးကြပ်ရေးမှူးကို တိုင်လို့ရတယ်။ အဲဒါမှ အရေးမယူဘူးဆိုရင် အထက်အဆင့်ဆင့်ကို အချိန်မီတိုင်ကြားလို့ရတယ်။ သူတို့မေးတာကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြန်မဖြေဘူးဆိုရင်လည်း အိမ်ရှင်ကို တရားစွဲလို့ရတယ်။ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦးက ပြည်ပမှာရောက်နေသူရှိရင် ဘယ်နိုင်ငံမှာ ရောက်နေပါတယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့သွားခဲ့သွားခဲ့ အရေးယူခြင်း၊ မယူခြင်းနဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံသား/မိသားစုဝင်တစ်ယောက် အခြားဘယ်နိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်သွားတယ်။ အဲဒါမှ ကိုယ့်သန်းခေါင်စာရင်းမှာ ကိုယ့်မိသားစုဝင်အားလုံးပါဝင်မယ်။ ကိုယ့်မိသားစုဝင်ထဲမှ ပျောက်ဆုံးနေသူရှိရင်လည်း ပြောပြရမယ်။ အခြားဘယ်နယ်ကို ရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ပြောပြရမယ်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ပြီးလို့ စာရင်းထုတ်ပြန်တဲ့အခါ အမည်စာရင်းထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ဘဲ လူဦးရေစာရင်းကို ရပ်ကွက်အဆင့်၊ မြို့နယ်အဆင့်၊ တိုင်းအဆင့်၊ ခရိုင်အဆင့် စသဖြင့် ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခံပြီးတဲ့အခါ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ အကြမ်းဖျဉ်း ရလဒ်ရှိလာပြီ။ အမျိုးသားဦးရေ၊ အမျိုးသမီးဦးရေကို ရပ်ကွက်အလိုက်၊ မြို့နယ်အလိုက် အသီးသီးဖော်ပြပေးလိမ့်မယ်။ နောက် ၁၁လကြာတဲ့အခါ အကုန်အပြည့်အစုံ ထုတ်ပြန်ပေးမယ်။ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအလိုက် အစီရင်ခံစာစစ်တမ်းတွေ ထွက်လာမယ်။ နောက် ၁၀နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ မှာ ဖြစ်လာမဲ့ လူဦးရေ၊ မွေးဖွားနှုန်း၊ သေဆုံးနှုန်း၊ သက်ကြီးရွယ်အို၊ လူငယ်အရေအတွက် စသဖြင့် အားလုံးကို ခန့်မှန်းနိုင်မယ်။ လူမျိုးစုအချို့ တိုးလာဖို့ရှိသလို လျှော့သွားနိုင်တဲ့ လူမျိုးစုလည်း ရှိနိုင်တယ်။
(၇) ပြည်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ
သန်းခေါင်စာရင်းဆိုတာ အိမ်ထောင်စုစာရင်းနဲ့မတူဘူး။ မှတ်ပုံတင်ကတ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်က လူအချင်းချင်း သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိသမျှကို မျှဝေမယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြေပေးကြဖို့၊ လှည်းနေ လှေအောင်း မြင်းစောင်းမကျန် လူမှန်သမျှ သန်းခေါင်စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ရမယ်ဆိုတာကို ပြည်သူအချင်းချင်းလည်း အသိပေးဖြန့်ဝေကြရမယ်။
This entry was posted on November 9, 2013 at 10:00 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.